मन्त्रीज्यू! वाचा नभुल्नुहोस्, परिणाम निकाल्नुहोस् :: प्रवीण ढकाल :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
प्रवीण ढकाल आइतबार, फागुन ११, २०७६, ०८:००:००
‘सिंहदरबारको चौघेराभन्दा बाहिरको मन्त्रालय, जहाँ जनताको सिधै एक्सेस (पहुँच) हुन्छ, त्यहाँ आएको छु। जनताका स्वास्थ्य र अरू विभिन्न अवसरबाट बञ्चित भएको ठाउँ (स्वास्थ्य मन्त्रालय)मा मलाई सरकारले पठाएको छ। जनताको स्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने विषय जनस्तरमा पुर्‍याउनका लागि यो जिम्मेवारी चाँहि उपयुक्त होला भनेर मलाई यहाँ पठाइएको हो। मैले यो जिम्मेवारी लिएको छु। जनताको पक्षमा काम गर्ने कुरामा तपाईंहरू (स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारी)ले प्रेरणा प्रदान गर्नु हुनेछ र त्यो सहकार्यमा नथाकी लाग्न पनि साथीहरूबाट अपेक्षा गर्दछु।’
माननीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालज्यू ! यो तपाईंले नै गत मंसिर ५ गते बिहीबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा राख्नुभएको धारणा हो। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट सरुवा भएर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गरेपछि मन्त्रालय र मातहतका कर्मचारीसहित सञ्चारकर्मीसामु तपाईंका यी धारणा व्यक्त भएका थिए।
तपाईंले यो धारणा राखेको पनि आज ९४औं दिन पुगेछ। यो अवधिसम्म आइपुग्दा तपाईंले यी कुरा पक्कै पनि भुल्नु भएको छैन होला। पक्कै पनि याद हुनु पर्ने हो।
जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मन्त्रालय भएकाले जनताका पक्षमा काम गर्न र स्वास्थ्य सेवालाई जनस्तरसम्मै पुर्‍याउने गरी काम गर्छु भन्ने वाचा गर्नुभएको थियो। पक्कै पनि यसका लागि काम गरिरहनु भएको पनि होला। हुन त मन्त्रालयले तयारी गरेर सार्वजनिक गर्न लागेको पनि होला। तर पनि हालसम्म ती विषय बाहिर नआएकाले मलाई केही विषयमा जिज्ञासा जागेको छ।
मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि यहाँले हालसम्म जनताका पक्षमा के कति काम गर्नुभयो? उपचारको पहुँचमा आउन नसकेका जनताका लागि सहज रूपमा उपचार गर्ने वातावरण बनाउन के कस्ता निर्णय गर्नुभयो? स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा सुधार ल्याउन के कस्ता निर्णय गर्नुभएको छ? यो अवधिमा देशभरका कति अस्पतालको सेवा बिरामीमैत्री बन्यो? कति अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थाको सेवामा सुधार भइरहेको छ? कति बिरामीले पैसा नभएकै कारण उपचारबाट बञ्चित हुनुपरेन?
यी लगायत धेरै काम मन्त्रालयले गरिरहेको पनि होला। तथ्यांक र विवरण पक्कै पनि हजुर र हजुरको टिमले बनाएको नै होला। तीन महिने ‘हनिमुन पिरियड’ सकिएसँगै यहाँले सुरुवाती कार्यकालमा भएका उपलब्धि र पदबहालीकै दिन गरेका वाचाअनुसारका कामको विवरण पक्कै पनि सार्वजनिक गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा छ।
पदबहालीको दिन मात्र होइन, यहाँले त्यसपछिका दिनमा पनि सार्वजनिक रूपमा जनताका पक्षमा काम गर्ने र स्वास्थ्य मन्त्रालयको विकृति सुधार गर्दै लैजाने वाचा थुप्रैपटक गरिसक्नु भएको छ। यो अवधिमा यहाँले झन्डै दुई दर्जनभन्दा बढी स्थानमा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका विषयमा बलिया र आकर्षक भाषण गर्नुभएको छ। सार्वजनिक रूपमा यहाँले व्यक्त गर्ने भाषण निकै शक्तिशाली पनि छन्। अब यहाँको ‘हनिमुन पिरियड’ सकिएको छ। अब यहाँले तीन महिनासम्म बोलेका र व्यक्त गरेका वाचा पूरा गर्ने समय आइसकेको छ। तपाईं आफैंलाई पनि अब त बोल्ने समय सकियो भन्ने लागेको होला नि?
स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई अब तपाईंले सार्वजनिक भाषणमा के भन्नुहुन्छ भन्ने कन्ठै हुन थालिसकेको छ। यहाँसम्म कि तपाईंले ‘यो धारणा राखेपछि अब यो कुरा राख्नुहुन्छ’ भन्ने पूर्वअनुमान गर्न गाह्रो पर्न छोडिसकेको छ। त्यसकारण मन्त्रीज्यूले अब परिणाम निकाल्ने बेला आइसकेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी तपाईंले सम्हालेपछि जनताले देख्ने र अनुभुति हुने गरी परिणाम आउन सकेको छैन। टाढाको कुरा नगरौं, तपाईंकै मन्त्रालयका कर्मचारीले समेत तपाईं आइसकेपछि भएका सुधारबारे दुई वाक्य बोल्न पनि कठिन छ। यो कुरा अलि अविश्वसनीय लाग्ला तपाईंलाई। एक पटक माताहतका कर्मचारीलाई नै बोलाएर सोध्नुहोला न।
स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएको दिन तपाईंलाई अधिकांश कर्मचारीले प्रधानमन्त्री निकटका शक्तिशाली मन्त्री भनेर चिनेका थिए। अहिले पनि त्यही रूपमा नै चिनिरहेकै छन्। विगतमा नीतिगत काम अगाडि बढ्न नसक्दा झन्डैझन्डै 'मल्टी- अर्गान' फेल हुने अवस्थामा पुगिसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अंगले पुनः स्वस्थ भएर काम गर्छन् भन्ने अपेक्षा राखिएको छ। तपाईंले त्यो अपेक्षालाई मर्न दिनुहुन्न भन्ने विश्वास छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आएपछि मन्त्रालयका लागि आफू नयाँ भएको र बुझ्ने क्रममा नै रहेको बताउनु भएको थियो। मलाई लाग्छ, यो तीन महिनाको अवधिमा यहाँले धेरै कुरा बुझिसक्नु भएको छ। स्वास्थ्यका थुप्रै निकाय, अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाको स्थलगत अवलोकन पनि गरिसक्नु भएको छ।
यही अवधिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको राष्ट्रिय समीक्षा गोष्ठीसमेत भएको छ। स्वास्थ्यका समस्या बुझ्न यो गोष्ठी तपाईंका लागि सबैभन्दा ठूलो र महत्वपूर्ण अवसर थियो। तपाईंले उक्त समीक्षा गोष्ठीमा देशभरका स्वास्थ्य संस्था र अस्पतालका प्रतिनिधिहरूबाट धेरै विषय बुझ्ने मौका पाउनु भएको छ।
समीक्षा गोष्ठीपछि यहाँले सुधारका लागि पक्कै पनि काम अगाडि बढाउनु भयो होला। गोष्ठीमा स्वास्थ्य संस्था र अस्पतालले उठाएका धेरै समस्याका विषयमा बहस भयो होला। समाधानका उपायका विषयमा पनि बहस भयो होला। नीति र रणनीतिका विषय पनि तय भए होला। तर यी विषय किन सार्वजनिक हुँदैनन् मन्त्रीज्यू?
स्वास्थ्यका विषय बुझ्न र सुधारका काम गर्न यहाँले स्वास्थ्यका विभिन्न विज्ञहरुसँग छलफल पनि गर्नुभएको थियो। उक्त छलफलमा उठेका विषय र सुझावअनुसार नै यहाँले काम अगाडि बढाइरहनु भएको होला भन्ने विश्वास पनि छ।
तीन महिनाको यो अवधिमा यहाँले रिक्त रहेका स्वास्थ्यका धेरै निकायमा नियुक्ति गरेर सकारात्मक सन्देश पनि दिनुभएकै छ। तैपनि, यो छोटो अवधिभित्रै स्वास्थ्यका कर्मचारीको सरुवामा भने यहाँले कानुन नै मिचिदिनु भयो। संघीयताको मर्मअनुसार नयाँ बनाइएका स्वास्थ्यका संरचनामा हुने दरबन्दीसम्बन्धी व्यवस्थाको पनि खिल्ली उडाइदिनु भयो।
यो कदमले विगतमा तपाईंले व्यक्त गरेका वाचामाथि प्रश्न उठन् थालेको छ। सुधारको गतिमाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ। किनभने यहाँले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको पाँचौं दिन मंसिर १० गते स्वास्थ्य सेवा विभागमा पुगेर ब्रिफिङ लिने क्रममा सबै कर्मचारीका अगाडि मन्त्रालयलाई विधिसम्मत ढंगले चलाउने वाचा गर्नुभएको थियो। सरुवामा हतार नगर्ने र राजनीतिक रूपमा पक्षपात गर्दिनँ पनि भन्नु भएको थियो।
सरुवाका लागि तीन महिनाको अवधि त पर्खनुभयो। तर, गत बिहीबार यहाँले एकैपटक स्वास्थ्यमा ठूलो संख्याका कर्मचारीको सरुवा गरिदिनुभयो। के अलि समय पर्खेर एकैपटक ठूलो संख्याका कर्मचारी सरुवा गर्नुलाई नै हतार नगर्नु भन्न खोज्नु भएको थियो यहाँले? विगतमा यहाँले गरेका वाचाअनुसार नै थियो त यो सरुवा पनि? के ती सबै सरुवा विधिसम्म नै छन्? पक्कै पनि छैनन् होला।
स्वीकृत दरबन्दी संरचना विपरीत समूह नै नमिलाई ७ जना निर्देशकलाई जिम्मेवारी दिनुभएको छ तपाईंले। राजनीतिक रूपमा पक्षपात गर्दिनँ भनेर तपाईंले भनेको कुरा व्यवहारमा लागू भएन मन्त्रीज्यू!
तपाईंका यी कदमले आगामी दिनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको काममा दूरगामी असर गर्ने देखिएको छ। तपाईंले नै भन्नु भएको थियो, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालय त माछाबजार जस्तो भद्रगोल छ’ भनेर। यो अवधिमा तपाईंले उक्त भद्रगोल माछा बजारलाई व्यवस्थित गर्न के–के काम गर्नुभयो? दरबन्दी संरचना विपरीत गरिएको सरुवाले मन्त्रालयको बिग्रिएको छवि सुधार गर्छ त? भद्रगोल माछाबजार व्यवस्थित गर्ने भनेको यही हो मन्त्रीज्यू?
जनताका पक्षमा बनेका थुप्रै ऐन तथा नियमहरूको कार्यान्वनयमा यहाँले कदम चाल्नु हुने छ भन्ने आशा थियो। संविधानले ग्यारेन्टी गरेको स्वास्थ्यको मौलिक हकको कार्यान्वयनको अवस्था के छ? जनस्वास्थ्य ऐन आएको डेढ वर्ष भइसकेको छ। तर त्यसको कार्यान्वयन र नियमावली बनाउने काम यहाँको प्राथमिकतामा परेको देखिन्न। प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन पनि कागजमै सीमित छ। औषधि र उपकरणसम्बन्धी ऐन तथा प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम असफलता तर्फ गइरहेको छ। यी विषयमा काम गर्न के ले रोक्यो मन्त्रीज्यू?
कर्मचारीको समायोजनको काम भद्रगोल छ। समायोजनका कारण दुरदराजका स्वास्थ्य संस्था रित्ता छन्। समायोजनको गुनासो बोकेर मन्त्रालयको चौरमा भेला भएका स्वास्थ्यकर्मीसँग बसेर यहाँले छलफल गर्नुभएको छ? समस्याका चाङ बोकेर मन्त्रालयको चौरमा बसिरहेका कर्मचारीको गुनासोभन्दा यहाँको कार्यकक्षमा सोझै पहुँच राख्ने 'कर्मचारी नेता'को कुरा मात्र सुनेर सबै समस्या समाधान हुन्छ जस्तो लाग्छ मन्त्रीज्यू?
स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा जनताको पहुँच विस्तार गर्ने, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि गर्नुपर्ने कामका विषय मन्त्रीज्यूको प्राथमिकता परेको देखिएको छैन। यो तीन महिनाको अवधि नियुक्ति, कर्मचारी सरुवा र भाषणमा मात्र सिमित भयो मन्त्रीज्यू तपाईंको। त्यसकारण अब समय आइसकेको छ, यहाँले गरेका वाचा पूरा गर्ने र परिणाम निकाल्ने। यी काम गर्न अब ढिलो हुन थालेन र मन्त्रीज्यू?
यहाँको सफलताको मापन सोही मन्त्रालयको सफलतासँग पनि जोडिन्छ। यति मात्र होइन, जनताको अपेक्षासँग पनि जोडिन्छ। देशको समृद्धिका लागि पनि यहाँको मन्त्रालय जोडिने कुरा जगजाहेर नै छ। आफू निकटका केही कर्मचारीको नियुक्ति र सरुवा मात्र गरेर जनताको जीवनस्तर सुधारका साथै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सबै जनतासामु पुग्छ र मन्त्रीज्यू?
मन्त्रीको पदमा रहँदा यहाँ केवल एक व्यक्ति मात्र हुनुहुने होइन। मन्त्रीप्रतिको अपेक्षा पनि एक जना व्यक्तिप्रतिको मात्र रहँदैन। पदले माग्ने काम र सक्रियता यहाँले देखाउनैपर्छ अब। यो वा त्यो बहानामा यहाँले पन्छिन मिल्दैन। त्यसकारण अब यहाँको ऊर्जा आफूले गरेका वाचा पूरा गर्न केन्द्रित हुनेछ भन्ने विश्वास छ। पदबहालीको दिन कर्मचारीसामु कमीकमजोरी सुधार गर्दै जनताको पक्षमा काम गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो। आशा छ, यो अवधिमा यहाँले आफ्नो तीन महिने कार्यकालको समीक्षा गरिसक्नुभएको छ। जनताले अपेक्षा गरेका काम पूरा गर्ने कार्ययोजना छिटै मन्त्रालयबाट सार्वजनिक पनि हुनेछन्।
सफल कार्यकालको शुभकामना।